Njengamanje, amakhaya amaningi eholide nezindawo zokungcebeleka zizama ukufezekisa izinga lezikhungo ze-SPA zanamuhla. Kungashiwo okufanayo ngendawo yokuhlala yesifunda saseKaluga. Namuhla esifundeni kunentuthuko ye-resort resort. Izindawo zokuhlala zezempilo zendawo zisebenzisa imishini yakamuva. Lokhu kuqasha abasebenzi abanekhono. Konke lokhu kuvumela izakhamuzi zesifunda ukuthi zijabulele ukuphumula okuhle kuphela, kodwa futhi ziphinde zivuselelwe ngemuva kokugula okukhulu.
Esifundweni esinikeziwe sizokhetha izindawo zokuhlala ezingcono kakhulu zesifunda saseKaluga ngokuphathwa. Ake sicabangele izikhombisi-ndlela eziyisisekelo zomsebenzi wezikhungo zezempilo zendawo. Sizochaza izinsizakalo ezinikezwa izikhungo zezempilo zesifunda.
Sizoqala ukubuyekezwa izikhungo zempilo zesifunda saseKaluga esiteshini sezempilo esibizwa ngokuthi "Vorobyevo". Kukhona isikhungo endaweni enhle kakhulu, emanzini emifula Rozhnya naseSukhodreva. Ngokuqondene nobude besikhungo sezempilo esivela eKaluga, ukuze sifinyelele esiteshini sezempilo, kuyoba okwanele ukumboza ibanga lamakhilomitha angu-45.
Indawo yokuthola impilo inephrofayli yezokwelapha ngokubanzi. Lapha, siphatha izifo ezithinta:
Phakathi kwezikhombandlela ezengeziwe zomsebenzi wokuthuthukisa impilo weziko elifanele ukubona: ukwelapha izinzwa, usizo kubantu abanesifo sikashukela.
Uma sikhuluma ngesikhungo sokuhlala esifundeni saseKaluga sinamanzi okubhukuda, indawo yokuqala ohlwini lwalezi zindawo zokungcebeleka kwezempilo kufanele ibekwe ngqo "Vorobyevo". Lapha kunenye yezinkulu kunazo zonke endaweni yangasese yangaphakathi enombono we-panoramic wezwe elihle. Ubukhulu bayo bungama-25 ngamamitha angu-10. Indawo yokudoba ihlukaniswe ngamathrekhi amahlanu ahlukene, okuvumela ukuba ujabulele ukubhukuda kuwo wonke ama-holidaymakers. Ama-indices amanzi emgodini wokubhukuda we-sanatorium "i-Vorobyevo" ilawulwa yinkqubo yekhompyutha entsha. Ngesizo salo, ukuhlanza okuzenzakalelayo kwe-reservoir, ukushintsha izinga le-pH lenziwa.
I-resort yezempilo ikhona ngobuhle obuhle beBarukoukovsky Reserve, emaphethelweni omfula i-Protva. Amaklayenti ase-sanatorium athola ithuba lokujabulela umoya ohlanzekile, ogcwele izicabangela zezimila zasensimini, ukuphumula esimweni esifundene esifubeni semvelo.
Insimu yesimiso ivikelekile futhi ifakwe kahle. Naphezu kwezindleko ezithengekayo zokuzilibazisa kuzo zonke izingxenye zomphakathi, kukhona insizakalo yekhwalithi, izinhlelo zamuva zokwelapha zisetshenziswa, futhi kukhona imishini yokwelapha entsha.
Uma sicabangela izikhungo zasemakhaya esifundeni saseKaluga, esingahamba nezingane ezincane, kubalulekile ukulalela "i-Vyatichi". Indawo yokuphumula yezempilo inesakhiwo esithuthukisiwe sokuhlala kahle kwemindeni. Lapha, ukudla okuhlukeneko kunikezwa izingane kanye nabantu abadala. Kukhona izindawo nezindawo zokudlala kule sanatorium. Ngesikhathi samaholidi, othisha abanekhono beza lapha, futhi akuyona into embi ukushiya ingane uma uya ebhizinisini lakho siqu.
Le sanato itholakala endaweni enhle kakhulu, hhayi kude ne-Obninsk, esifundeni saseKaluga. Izikhonkwane zalo zizungezwe amahlathi anqabileko ne-coniferous. Emfuleni i-Protva. Ukuphulukisa umoya, ogcwele ama-aromas e-tar, indawo ekhulisayo, izimo ezihle kakhulu zezulu-konke lokhu kukhanga izivakashi lapha unyaka wonke.
Ngokucubungula izikhungo zempilo zesifunda saseKaluga ngokuphathwa kwesimiso sezinzwa, uhlelo lwe-musculoskeletal, uhlelo lwezinhliziyo, ukunakwa okukhethekile kufanele kukhokhwe ngokuqondile kwi-resort resort "Uphawu". Lesi sikhungo sinabasebenzi abanekhono kanye nesakhiwo esiyinkimbinkimbi semishini yesimanje edingekayo ekuvuselelweni okuphumelelayo ngemuva kokuhlinzwa. Indawo ekhethekile kanye nesikhungo sezempilo kanye nokwelashwa kwesifo sikashukela, stenocardia, infarction myocardial. Ochwepheshe basekhaya bahlakulela izinhlelo ezithile zokuhlanza umzimba, ukuvimbela isifo senhliziyo.
Yini enye ongayisho ngamayelana nezindlu zasendaweni yaseKaluga? Kufanelekile ukunakekelwa kwesinye isiteshi sezempilo esidumile esibizwa ngokuthi "iSputnik". Itholakala indawo yokuvakasha kanye nokuzilibazisa ehlathini elimnandi le-pine, endaweni eqhele ngamakhilomitha angu-1 edolobheni laseLyudinovo. Umoya ohlanzekile, ogcwele iziphuzo zokuphulukisa zezihlahla ze-coniferous, izimo ezihambisana nemvelo, ukutholakala kwabasebenzi bezokwelapha abanolwazi, ukutholakala okuphelele komzimba - konke lokhu kulindele izivakashi kule sanatorium.
Ngokuqondene nephrofayli yezokwelapha yesikhungo, iphathelene nokuphathwa kwezifo:
Ochwepheshe be-sanatorium bathuthukisa izinhlelo zokwelapha ngabanye ngesisekelo sokuhlolwa kokuqala kweziguli. Isiqondiso esengeziwe se-resort yezempilo siyindlela yokwelapha.
I-sanatorium itholakala ngamakhilomitha angu-13 ukusuka enkabeni yeKaluga. Eduze i-Oka River. Izakhiwo ze-resort zezempilo zitholakala ehlathini elihle le-pine. Lapha kukhona ichibi elincane uVyrka.
"I-Zvezdny" ifakwe ohlwini lwezindawo zokungcebeleka ezingcono kakhulu zezempilo, lapho izidumbu ze-sanatoriums esifundeni saseKaluga ezinezibhuku zokubhukuda zimelelwa. Izimpendulo zabavakashele zisitshela ngokusungulwa njengendawo enhle kakhulu yokubhukuda emzimbeni wamanzi nemvelo. Ngaphandle kwedamu lokubhukuda ne-sauna, kunehholo lamakhonsathi, amakamelo amabhilidi, izinkantolo zezintambo, i-ski centre, i-gym. Ukuze uthole imali eyengeziwe, ukuvakasha okuthakazelisayo kuhlelwe amaklayenti.
Iphrofayela ye-resort yezempilo ihloselwe ukwelashwa:
Ngakho sathola ukuthi iyiphi i-sanatoria yesifunda saseKaluga inelungelo lokuthiwa yiyona engcono kakhulu esifundeni. Ngokwemvelo, lokhu okungenhla akuzona zonke izikhungo zezempilo zendawo. Kodwa yizindawo zokuhlalisa ezihlakalweni lwethu ezithandwa kakhulu ngamaholide.
"Neofilin" (amaphilisi): yokusetshenziswa. "Neofilin 100 mg": incazelo ukulungiselela
I-smartpot - I-Kit Yokunisela Ngokuzenzakalela Yamasimu Ekhaya
Euro 1996: Imiphumela futhi amaqiniso
Kuyini neurosyphilis? Izimpawu, amafomu, ukwelashwa, imiphumela
Amandla Quality Analyser. Izinsimbi energy kagesi
Uhlelo Imininingwane: izinhlobo nezibonelo. Kuyini - uhlelo ulwazi?